ဟန်ထူးလွင်ကညီမလေးကို အိမ်ထိလာပြီး Surprise လုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ဟန်နေလွင်လွင် – Cele Snap
အဆိုတော်ကြီး ရင်ဂိုရဲ့ သားနဲ့ သမီးဖြစ်တဲ့ ဟန်ထူးလွင်နဲ့ ဟန်နေလွင်လွင်တို့က ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ခြေရာကိုနင်းပြီး အနုပညာလောကထဲမှာ အောင်မြင်စွာရပ်တ ည်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်ထူးလွင်က Big Bag Band နဲ့အတူတူ သီချင်းတွေ သီဆိုနေသလို ဟန်နေလွင်လွင်ကတော့ သူမရဲ့ Hannay and The Zens Band နဲ့အတူတူ သီချင်းတွေ သီဆိုဖန်တီးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်ထူးလွင်နဲ့ ဟန်နေလွင်လွင်တို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ကတော့ စိတ်တူ ကိုယ်တူ ဝါသနာတူကြတာကြောင့် အခြားမောင်နှမတွေထက် ပိုပြီး ရင်းနှီးကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာလည်း ဟန်ထူးလွင်က သူ့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောညီမလေး ဟန်နေလွင်လွင်ကို အိမ်ထိလာပြီး Surprise လက်ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းကို ဟန်နေလွင်လွင်က “အိပ်နေတုံး ခူခူး ဆိုပြီးအကျယ်ကြီးအော်ခေါ်တာကြားလိုက်သလိုလိုမကြားလိုက်သလိုလို ဖေဖေနဲ့ကိုတေးက အသံကျယ်ကျယ်အော်ရင်ဘယ်သူမှန်းမသိဘူးခွဲရခက်တယ် အိပ်မက်မက်နေတယ်ထင်ပြီးဇဝေဇဝါနဲ့ထမကြည့်ပဲ ပြန်အိပ်နေတာ phone ခေါ်ပြီး ဟဲ့ ပြူတင်းပေါက်ဖွင့်ကြည့် လက်ဆောင်လာပေးတာ ဆိုတော့ဖွင့်လဲကြည့်ရော TADA!!! 😍 Han Htue Lwin သိုင်းကျူးစိုးမက် အိုင်လက်အစ်” ဆိုပြီး ပြောပြလာပါတယ်။
ဟန်ထူးလွင်ကတော့ ညီမလေးအတွက် စီးတော်ယာဉ်လေးတစ်စီးလက်ဆောင်ပေးပြီး ပျော်ရွှင်သွားအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဟန်ထူးလွင်နဲ့ ဟန်နေလွင်လွင်တို့ မောင်နှမနှစ်ယောက် ကိုကြည့်ပြီး ကြည်နူးနေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Hannay Lwin Lwin’s fb
အဆိုတျောကွီး ရငျဂိုရဲ့ သားနဲ့ သမီးဖွဈတဲ့ ဟနျထူးလှငျနဲ့ ဟနျနလှေငျလှငျတို့က ဖခငျဖွဈသူရဲ့ ခွရောကိုနငျးပွီး အနုပညာလောကထဲမှာ အောငျမွငျစှာရပျတ ညျနသေူတှဖွေဈပါတယျ။ ဟနျထူးလှငျက Big Bag Band နဲ့အတူတူ သီခငျြးတှေ သီဆိုနသေလို ဟနျနလှေငျလှငျကတော့ သူမရဲ့ Hannay and The Zens Band နဲ့အတူတူ သီခငျြးတှေ သီဆိုဖနျတီးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဟနျထူးလှငျနဲ့ ဟနျနလှေငျလှငျတို့ မောငျနှမနှဈယောကျကတော့ စိတျတူ ကိုယျတူ ဝါသနာတူကွတာကွောငျ့ အခွားမောငျနှမတှထေကျ ပိုပွီး ရငျးနှီးကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာလညျး ဟနျထူးလှငျက သူ့ရဲ့ တဈဦးတညျးသောညီမလေး ဟနျနလှေငျလှငျကို အိမျထိလာပွီး Surprise လကျဆောငျပေးခဲ့ကွောငျးကို ဟနျနလှေငျလှငျက “အိပျနတေုံး ခူခူး ဆိုပွီးအကယျြကွီးအျောချေါတာကွားလိုကျသလိုလိုမကွားလိုကျသလိုလို ဖဖေနေဲ့ကိုတေးက အသံကယျြကယျြအျောရငျဘယျသူမှနျးမသိဘူးခှဲရခကျတယျ အိပျမကျမကျနတေယျထငျပွီးဇဝဇေဝါနဲ့ထမကွညျ့ပဲ ပွနျအိပျနတော phone ချေါပွီး ဟဲ့ ပွူတငျးပေါကျဖှငျ့ကွညျ့ လကျဆောငျလာပေးတာ ဆိုတော့ဖှငျ့လဲကွညျ့ရော TADA!!! 😍 Han Htue Lwin သိုငျးကြူးစိုးမကျ အိုငျလကျအဈ” ဆိုပွီး ပွောပွလာပါတယျ။
ဟနျထူးလှငျကတော့ ညီမလေးအတှကျ စီးတျောယာဉျလေးတဈစီးလကျဆောငျပေးပွီး ပြျောရှငျသှားအောငျ ပွုလုပျပေးနိုငျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ဟနျထူးလှငျနဲ့ ဟနျနလှေငျလှငျတို့ မောငျနှမနှဈယောကျ ကိုကွညျ့ပွီး ကွညျနူးနကွေမယျ ထငျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ မိသားစုနဲ့အတူ ကစားနည်းမျိူးစုံနဲ့ ကစားခဲ့ကြတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုပြသလာတဲ့ ၀ါဆိုမိုးဦး